အီတာလျံ−ထိုင်းကုမ္ပဏီနှင့် ချုပ်ဆိုခဲ့သော ကနဦးစီမံကိန်း လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်သဘောတူစာချုပ်အားလုံးအား ရပ်ဆိုင်း...
[Unicode] အီတာလျံ−ထိုင်းကုမ္ပဏီနှင့် ချုပ်ဆိုခဲ့သော ကနဦးစီမံကိန်း လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်သဘောတူစာချုပ်အားလုံးအား ရပ်ဆိုင်းခဲ့ ကြောင်း ဇန်နဝါရီ ၁၈ ရက်က နေပြည်တော်၌ လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနကပြုလုပ်သော ထားဝယ်အထူးစီးပွားရေးဇုန်...
ဆေးထိုးပြီးနောက်သေဆုံးမှုများနှင့် ကာကွယ်ဆေးအကြား ဆက်စပ်မှုမရှိကြောင်း နော်ဝေးထုတ်ပြန်...
[Unicode] Pfizer-BioNTech ၏ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးနှင့် နိုင်ငံအတွင်း ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးနောက် သေဆုံးမှုများအကြား ဆက်စပ်မှုမရှိကြောင်း နော်ဝေအစိုးရက ဇန်နဝါရီ ၁၈ တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ သို့သော် ကာကွယ်ဆေးမထိုးနှံပေးခင် သက်ကြီးရွယ်အိုများ၏ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို အဘက်ဘက်မှ...
တရုတ်ပြည်တွင် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ပထမဆုံးကူးစက်ခံရသူ မတွေ့ရှိမီကတည်းကပင် တရုတ်သိပ္ပံပညာရှင်များ၌ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ရောဂါလက္ခဏာများ ပြသခဲ့ကြောင်း အမေရိကန်ပြောကြား...
[Unicode] တရုတ်ပြည် ၊ ဝူဟန်မြို့သည် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် စတင်ပေါ်ပေါက်ရာနေရာဟု မကြာခဏ အပြစ်တင်ခံရသည့်နေရာတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ယခုအခါ သိပ္ပံပညာရှင်များစွာနှင့် ကျန်းမာရေးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များနည်းတူ အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာနကလည်း တရုတ်အစိုးရသည်...
နေပြည်တော်နယ်မြေတွင် ယခုနှစ်ဆန်းပိုင်း မြေကွက်များ အရောင်းအဝယ်ဖြစ်
[Unicode] နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေတွင် ယခုနှစ်ဆန်းပိုင်း မြေကွက်များ အရောင်းအဝယ်ဖြစ်ကြောင်း၊ စည်ပင်ကရောင်းချပေး နေသည့် ဒက္ခိဏသီရိမြို့နယ်ရှိ ပေ ၈၀ ပတ်လည် မြေကွက်များ အရောင်းအဝယ်လိုက်လာသည်ကိုတွေ့ရကြောင်း ဇန်နဝါရီ ၁၃ ရက်က နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ...
ကမ္ဘာ့ရာသီဥတု ဘာတွေဖြစ်ကုန်ပြီလဲ? ဆာဟာရသဲကန္တာရတွင် ရေခဲများဖုံးလွှမ်းနေပြီး ဆော်ဒီအာရေးဘီးယားတွင် အနှုတ် ၂ ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ်အထိ အပူချိန်ကျဆင်း...
[Unicode] ဇန်နဝါရီလသည် ကမ္ဘာတစ်ဝန်း နေရာများစွာအတွက် နှင်းနှင့် ရေခဲများ ဆောင်ကြဉ်းလာလေ့ရှိသော်လည်း အာဖရိကမှ သဲကန္တာရများနှင့် အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသတို့နှင့် မသက်ဆိုင်ချေ။ သို့သော် ယခုနှစ် ဇန်နဝါရီတွင်ကား ဆာဟာရသဲကန္တာရတွင် နှင်းထုများ တွေ့လာရသည့်နည်းတူ...
ပူပူနွေးနွေး ကိန်းဂဏန်းများဖြင့် Facebook
[Unicode] ကုမ္ပဏီအချက်အလက် URL: https//www.facebook.com တည်ထောင်သည့်ခုနှစ် : ၂၀၀၄ အစောပိုင်း (မာ့ခ်ဇက်ကာဘာ့ဂ်တစ်ယောက် ဟားဗတ်တက္ကသိုလ်မှာ ကျောင်းသားဘဝသာ ရှိသေး) CEO (အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်) : မာ့ခ်ဇက်ကာဘာ့ဂ် ရုံးချုပ် : 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025 ဝန်ထမ်းဦးရေ : ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဇွန် ၃၀ အထိ...
ခရီးသွားများအတွက် မလိဝမ်း သဘာ၀ရေတံခွန်နှင့် သဘာ၀ရေပူစမ်း
[Unicode] ပြည်တွင်းပြည်ပ ခရီးသွားများ ကိုဗစ်အလွန်တွင် ကော့သောင်းမြို့နယ်ရှိ မလိဝမ်း သဘာ၀ရေတံခွန်နှင့် သဘာ၀ရေပူစမ်း သို့ လာရောက်လည်ပတ်နိုင်ရန်စီစဉ်ထားကြောင်း နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာအရ သိရသည်။ မလိဝမ်း သဘာ၀ရေတံခွန်နှင့် သဘာ၀ရေပူစမ်းသို့ သွားလိုပါက...
အိမ်ရာအဟောင်းတွေကနေ အသစ်တွေပြန်လည်တည်ဆောက်မယ့် စီမံကိန်းတွေက ဘာတွေဖြစ်မလဲ...?
[Unicode] အိုဟောင်းနေတဲ့ အိမ်ရာ တိုက်တန်းကို ဖျက်ပြီး အဆင့်မြင့် Public housing ပြန်လည်လုပ်ဆောင်နေမှုကို အခု၂၀၂၁အတွင်းပိုမိုပြီးလုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်လို့ ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနထံကသိရပါတယ်။ ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန...
နိုင်ငံလေးနိုင်ငံမှာ စီးပွားရေးသံမှူးတွေ ထပ်မံခန့်အပ်နိုင်ခဲ့
[Unicode] ဈေးကွက်ရှာဖွေဖို့နဲ့ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုတွေတိုးချဲ့နိုင်ဖို့ စီးပွားရေးသံမှူးတွေကို အခုနှစ်သစ်မှာ နိုင်ငံလေးနိုင်ငံကို ထပ်မံတိုးချဲ့ပြီး စေလွှတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ စီးပွားရေးနဲ့ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနထံကသိရပါတယ်။ အရင်က...